Tababare Solskjær oo ka hadlay arimo ku saabsan Mourinho iyo qorshahooda kaga aadan suuqa kala iibsiga – Gool FM
Tababare Solskjær oo ka hadlay arimo ku saabsan Mourinho iyo qorshahooda kaga aadan suuqa kala iibsiga
(Manchester) 18 Jan 2019. Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær ayaa iska diiday inuu faalo ka bixiyo hadalo uu sheegay macalinkii horey Red Devils ee Jose Mourinho.
Mourinho ayaa sheegay in maamulka kooxda aysan ilaalin Karin dhibaatada macalimiinta kala dhexeysa ciyaartoyda, xili mudadii dheereed uu ku sugnaa kooxda Manchester United uu ku noola hotel, mana uusan lahayn guri qaas ah, taasoo keentay inuu dareemo kalinimo.
Shabakada “Sky Sports” ee dalka England ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay Ole Gunnar Solskjær kahor kulanka ay bari kula ciyaari doonaan kooxd Brighton ee horyaalka Premier League wuxuuna yiri:
“Mourinho waa tababare cajiib ah, natiijooyinkii uu ka sameeyay Red Devils, halis kuma ahan inuu helo koox cusub”.
“Kama hadli doono hadalada Mourinho, waan ku faraxsanahay shaqadeyda halkan ee ciyaartoyda, waa intaa waxa aan awoodo inaan sheego”.
“Waxaan wali deganahay hotelka, laakiin waxaan ku guuleystay inaan helo qeyb aan weyneyn, waxaan leelinayaa wakhti, waxaan halkan ku leeyahay saaxiibo badan, sidaas darteed kuma sugni hotelka anig kaligey”.
Waxaa xusid mudan in tababare Solskjær uu guul la gaaray Red Devils 5-tii kulan ugu horeysay uu leeliyay horyaalka Premier League, taasoo ka caawisay in kooxda Arsenal ay kala sinaadaan dhanka dhibcaha waxay heystaan min 41 dhibcood, balse waxay booska 6-aad ugu jiraan farqiga goolasha.
Ugu dambeyn tababare Ole Gunnar Solskjær ayaa sheegay inuusan fileynin in Manchester United ay heshiisyo cusub sameyn doonin suuqa bishan Janaayo”.
ARAG SAWIR Laga sameeyay Higuain oo imaanaya Chelsea iyo Morata oo ka tagaya